ငွေကြေးခဝါချမှုစိစစ်ရေးဌာနခွဲ | MFTB | Myanmar Foreign Trade Bank
Home » ဌာနခွဲများ » ငွေကြေးခဝါချမှုစိစစ်ရေးဌာနခွဲ
၁။ မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်သည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှု အဖွဲ့အစည်းများအား ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုဘဏ်များ တစ်ဆင့်ကျူးလွန်မှုမရှိစေရေး ငွေကြေးခဝါချမှု စိစစ်ရေးဌာနစိတ် အသစ်တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းမှုကို (၂၅-၅-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးခဲ့ပါသည်။ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှု အဖွဲ့အစည်းများအား ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု စိစစ်ရေးကော်မတီအား (၁၉.၂.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် အဖွဲ့ဝင် (၁၀) ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ငွေကြေးခဝါချမှုစိစစ်ရေးဌာန ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ (၁) ဦးမှ Compliance Officer အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။
၂။ မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်သည် Customer များ၏ Daily Transaction များကိုလည်းAML/ KYC CDD နှင့်အညီ စိစစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အဆက်အသွယ်ဘဏ် များသို့လည်းပုံမှန် AML/ KYC CDD review ကိုစိစစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
၃။ မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်သည် AML Policy အရ Shell Banks များ၊ Work- In- Customer များ၊ Downstream Correspondent ClearingServices များ၊ Payable- through accounts များ၊ anonymous accountsများနှင့် ပတ်သက်၍လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိပါ။
၄။ သင်တန်းများနှင့်ပတ်သက်၍လည်းပြည်တွင်း၊ ပြည်ပတွင် AML/ CFT ဆိုင်ရာသင်တန်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများသို့တက်ရောက်ခဲ့သောအရာထမ်းကြီးများမှ ဘဏ်တွင် ဆင့်ပွားသင်တန်းများ ပြန်လည် ပို့ချလျက် ရှိပါသည်။
၅။ ငွေကြေးခဝါချမှုစိစစ်ရေးဌာနနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းလိုပါက အောက်ပါအတိုင်းဆက်သွယ် နိုင်ပါသည်။
(၁) Compliance Officer - U Kyin Thein
Title -Deputy General Manager/Compliance Officer
Phone No. -95-01-370780
(၂) Contact Person -Daw Myat Myat Htwe
Phone No. -95-01-8372137
၆။ ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ညွှန်ကြားချက်များကို www.cbm.gov.mm တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
၇။ မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်၏ Wolfsberg Questionnaire (2014) အား သိရှိနိုင်ရန်ဖော်ပြထားပါသည်။
၈။ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဉပဒေကို www.mfiu.gov.mm တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။